Sales Promotion ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - Better Version
July 15, 2020 2020-08-18 16:35
ကျွန်တော်တို့ ရောင်းအားတက်စေဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဗျူဟာတွေချမှတ်တဲ့ နေရာမှာ Sales Promotion Plan ဆိုတာကလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။
ဒီတော့ အရောင်းတက်စေဖို့ Sale Promotion တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၃ ခုကို ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
၁) Consumer Promotions
၂) Trade Promotions
၃) Salesforce Promotions
၁) Consumer Promotions (၀ယ်သူတွေကိုပေးမယ့် promotion)
ရောင်းအားတက်စေဖို့ Sale Promotion ပေးတော့မယ်ဆိုရင် ၀ယ်သူတွေ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ယ်ချင်လာအောင်ဘယ်လို Promotion မျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်သင့်သလဲ ဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ pull technique လို့ ခေါ်ပါတယ် အများစုကတော့ ဈေးလျှော့ပေးတာမျိုးနဲ့ ၊ ပစ္စည်းအပိုပေးတာမျိုးတွေကို သုံးကြတာများပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ Consumer Promotions တွေကိုဥပမာပေးချင်ပါတယ်။
၁) BOGOF လို့ခေါ်ပါတဲ့ တစ်ခု၀ယ်တစ်ခုလက်ဆောင် (Buy one get one free).
၂) လျှော့ဈေးကူပွန်၊ နောက်တစ်ခါထပ်၀ယ်တဲ့ အခါ ဘယ်လောက် % free ရမယ်ဆိုတာမျိုး
၃) FMCG product တွေဆိုရင် On-pack gifts ပေးတာမျိုး− ဥပမာ သွားတိုက်ဆေးမှာ သွားပွတ်တံ တွဲပေးတာမျိုး
၄) ကုန်ပစ္စည်းသစ်တွေဆိုရင် ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ဈေး ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခု လျှော့ဈေးပေးတာမျိုး
စသည်ဖြင့် ကိုယ့် လုပ်ငန်း၊ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ promotion plan မျိုးကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှပဲ ၀ယ်သူတွေရဲ့ ၀ယ်ချင်စိတ်ကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး ရောင်းအား တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ပေါ်ရောက်သွားအောင်၊ ၀ယ်ယူသုံးစွဲသူ (customer or end-user) ဆီများများရောက်သွားအောင် လုပ်တဲ့ နည်း ပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် push technique ပေါ့။ consumer promotion နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
အဓိက ကတော့ B2B customer တွေကိုပေးတာမျိုးတွေပါ။ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို တစ်ဆင့်ခံဖြန့်‌ဝေတဲ့အခါ များများရောင်းပေးဖို့အတွက် B2B customer တွေကို incentive ပေးတာပါ။
လက်လီသမား တွေက တစ်ဆင့် ကိုယ့် product ကို ဖြန့်တဲ့ အခါမျိုးမှာ သူတို့ ဆီမှာ stock များများရှိနေစေဖို့၊ သူတို့က တစ်ဆင့် သုံးစွဲသူတွေ (end-user) ဆီရောက်အောင် များများလုပ်စေချင်တဲ့ အခါ Trade Promotions ကိုသုံးပါတယ်။ ဥပမာ − Batch purchase တွေအတွက် discount ပိုပေးတာမျိုးတွေ၊ အပို လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေ၊ Profit margin ကို တိုးပေးတာမျိုး တွေပါပါတယ်။ ဒါကလည်းအရောင်းတက်စေဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Personnel motivation လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ရောင်းပေးရတဲ့ အရောင်းသမားတွေအတွက်ပေးတာပါ။ ရောင်းအားတက်ဖို့ ဆိုရင် ကိုယ့်အရောင်းအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်း၊ရောင်းနိုင်စွမ်းတွေတက်လာဖို့ကလည်း အဓိကကျပါတယ်။ ကိုယ့်လူတွေများများရောင်းနိုင်မှ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရောင်းအားတက်လာမှာလေ။
အရောင်းသမားတွေ များများရောင်းဖို့ကလည်း သူတို့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာ အလုပ်လုပ်နေမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့် လုပ်ငန်းက အရောင်းသမားတွေ ကို motivation ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင်တော့ – သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့် မှီအောင် ရောင်းနိုင်တဲ့ အရောင်းသမားအတွက် သူရဲ့ စိတ်၀င်စားမှုကိုလိုက်ပြီး Bonus ပေးတာမျိုးတွေ၊ လစာတိုး၊ ရာထူးတိုးပေးတာမျိုးတွေ၊ ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရရင်တော့ ဘယ်ခရီးသွားခွင့်ရှိမယ်၊ ဘယ်လောက် ကော်မရှင်ခံစားခွင့်ရှိမယ်၊ ဘယ်လောက်ဆိုရင်တော့ MBA တက်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ပါပါမယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့လည်းငါတို့ ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းနိုင်ရင်တော့ ဘာတွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ motivate ဖြစ်ပြီး များများရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမှာပါ။
ဆိုတော့ ဒီ အချက်တွေကို လေ့လာသုံးသပ် ပြီး ကိုယ့် လုပ်ငန်းရောင်းအားတက်စေဖို့ မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် (successful sales promotion plan)‌ ရေးဆွဲနိုင်ကြစေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ အရောင်းနည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Better Version မှ ဖွင့်တဲ့ သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းအပ်ရန် မက်ဆေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်း ၀၉၄၂၄၆၃၈၃၈ ၊ ၀၉၄၅၀၄၉၃၉၄၈ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိပစ္စည်း Qualityလည်း အဓိကကျပါတယ်. အရောင်းဝန်းထမ်းဘယ်လောက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေကိုယ့်Qualityကစားသုံးသူကဖော်ပြသွားပါတယ်
Marketing Mix 4P မှာ Product ဆိုတာ အရင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Product Quality ကသေချာပေါက် အရေးကြီးတာပေါ့။ အခုရေးထားတာကတော့ Promotion အကြောင်းကို ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။